Health – Shwe Ba
Shwe MM | September 19, 2020
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီ တစ်ခါ တင်ဆ က်ပေးမယ့် သတင်းလေးကတော့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အထူး ဂရုပြုရမယ့် အကြောင်းလေးပါပဲ။ အမှတ်မထင်ကနေ အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့် ဒီ အေ ကြာင်းအရာလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒါကေ တာ့ ပါရာစီတမောနဲ့ ကော်ဖီ တွဲဖက်ပြီး မသောက်သင့်တဲ့အကြောင်းလေး ပါပဲ။ ဒီအကြောင်းလေးကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ကို့ ရဲ့ရစ်
အဆုတ် ကို သန့်စင်စေ မယ့် အစား အစာ (၁၀) မျိုး…
အဆုတ် ကျန်းမာရေးက ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာ အသက်ရှူတိုင်းသတိရနေသင့်တာပါ။ အသက်ကောင်းကောင်းရှူနိုင်မှအဆုတ် က ကျန်းမာမှာဖြစ်သလိုလေထုညစ်ညမ်းစေတဲ့အရာမှန်သမျှ အဆုတ်ရဲ့ရန်သူပါပဲ။ လေရှူသွင်းလိုက်တိုင်းကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲ က အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာဝတ္တုတွေကို အဆုတ်က လက်ခံရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အဆုတ်ကိုသန့်စင်စေမယ့် အစားအသောက် တွေ ကိုရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်မယ်၊အဆုတ်ကိုအားကောင်းစေမယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်၊လေပြွန်ရောင်၊ အဆုတ်ရောင်တို့လို အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဟာမဖြစ်အောင်ရှောင်လို့ရတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုရှိမယ်၊လေထုညစ်ညမ်းတာတွေမရှူရှိုက်မိအောင်သတိထားမယ်၊ဆေးလိပ်မသောက်ဘူးဆိုရင် အများစုက ဒီရောဂါတွေကိုရှောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာနိုင်ဖို့က ကျန်းမာပြည့်စုံတဲ့အာဟာရအထောက်အပံ့ကို
ဒီလို တွေ စဖြစ် တာ သိသိ ခြင်း သံပုရာ ရည် ကို ရေနွေးနွေး နဲ့ သောက် လိုက်ပါ
Shwe MM | August 25, 2020
ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံ ယူရင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာသည့် လူနာများ၏ ပြောပြချက်… နေ့စဉ် နေ့တိုင်း 1. ဗီတာမင်စီ – 1000 သောက် ရတယ် 2. ဗီတာမင် အီး သောက်ရတယ် 3. နံနက် 10:00 – 11:00 အချိန်အတော အတွင်း ၁၅
ဆေးရုံက လက်မခံ တော့တဲ့ တီဘီ သမားကို အရှင်း ပျောက်သွား စေခဲ့တဲ့ အဖိုးတန် ဆေးပင်
Shwe MM | August 24, 2020
ဆေးရုံက ပြန်လွှတ် လိုက်တဲ့ အဆုတ် တီဘီ သမားတစ်ယောက် တောမှာ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ အပင်ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ရောဂါပျောက်ကင်းပြီး အသက် ရှည်ရှည် နေသွားရတဲ့ အကြောင်း ဖေါက်သည်ချပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်နား မှာ ကိုကံမြင့် ဆိုတဲ့လူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ပုံက အရိုးပေါ်အရေတင်။ချောင်း တစ်ဟွတ်ဟွတ်နဲ့ သွေးအန်နေပါပြီ။ တိုတိုပြောကြစို့ရဲ့။အခြေအနေက အနှုတ်လက္ခဏာပြနေပြီ။ အနီးဆုံး
လူတွေ စားနေကြတဲ့ ဆေး ဘဲဥထဲကကြောက်စရာကောင်း တဲ့ အ ဆိပ်အကြောင်း လူတိုင်း သိအောင် မျှဝေပေးကြပါ
Shwe MM | August 9, 2020
မြန် မာနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဟင်းအမယ် မဟုတ်ပေမယ့် ဆိုင်တွေမှာဟင်း အမယ် တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေတဲ့ ဖီတန်သုပ် ( ခေါ်) ဆေးဘဲဥသုပ်ကို လူတိုင်းစားဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဘီယာသောက်တတ်တဲ့ လူငယ်တွေအကြားမှာ ဖီတန်ဟာ အမြည်း တစ်ခုအဖြစ် အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ ဟင်းအမယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖီတန် လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးဘဲဥ ရဲ့ အစက တရုတ်နိုင်ငံက
နှစ်ရှည် လများ စွဲကပ် နေတဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ ရောဂါတွေ ပျောက် ကင်း စေတဲ့နည်း
Shwe MM | July 27, 2020
မြန်မာဆေး မြန်မာဆေးပညာ အိပ်မပျော် သောရောဂါနင့် မြန်မာဆေး။ တောင်ကြာဥအရင့် ၁ ပိသာ၊ ဘုမ္မရာဇာမြစ် ၁၂ ကျပ် ၊ဒန့်ကျွဲရွက် ၂၀။ ကာဝတ်ဆံ ၂။ ကြာညှောက် ၁၂။ ကံကော်ဝတ်ဆံ ၂၀။ ဆီးစေ့အဆံ ၂၀။ တောင်ကြာဥမှာ ကြက် သွေးရောင်နဲ့ အဝါရောင် နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ အဝါရောင်ကိုသုံးရန်
သွား ဘယ်လောက် ပဲ ကိုက်ကိုက် (၅) မိနစ် အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားစေမည့် ဆေးနည်းတစ်လက်
Shwe MM | July 25, 2020
မည်သည့် နည်း နဲ့ သွား ကိုက်ကိုက် အသုံးဝင် ထိရောက်စေသော သွားကိုက် သွားနာ ဆေးနည်း တစ်လက်မှာ (၁) ကပ်စေးနှဲသီးများကို မီးဖြင့်ကျွမ်းအောင်လှော် (၂) အမှုန့််ထောင်းပြီး ဖန်ပုလင်းထဲထည့် (၃) ကိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သွားကို ဆေးမှုန့်သိပ် ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၄) သွားဘယ်လောက်ပဲ ကိုက်ကိုက် (၅) မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားမည်ဟု
သိထားသင့်တဲ့ “နဂါးမောက်သီး” နဲ့ “ကျန်းမာရေး”
Shwe MM | July 12, 2020
အခုတလော ကျွန်တော် တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေ စား လာကြတဲ့ နဂါးမောက်သီး ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေး တွေ သိသလောက်တင်ပြ ပေးပါမယ်။ (၁) ဝိတ်လျော့တဲ့ နေရာ မှာ အသုံးဝင်ခြင်း အနေတော် အတုံး ၅ တုံးလောက်စား မှ ကယ်လိုရီ ၆၀ ပဲရှိတဲ့ အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်
အသည်းကင် ဆာ နောက်ဆုံး အဆ င့်လူနာ အံ့ အားသင့်ဖွယ် အရှင်းပျော က်ကင်း သွားစေသော ဆေးနည်း
Shwe MM | June 30, 2020
အ ရက် အရမ်းသောက်ခဲ့တဲ့ ညီတစ်ယောက် အခုတော့ အသဲ မှာ အနာဖြစ် လို့ ဆေးရုံ ခဏခဏ တက်နေ ရပြီ။ ဆေးရုံတက် ဆေးစစ်လိုက်တော့ အသဲကင်ဆာ တဲ့ ။အ သဲ က င်ဆာဖြစ်နေတဲ့ ညီ အတွက် သူမိသားစု တစ်ခုလုံးက စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေရပြီ တစ်မိသားစုလုံးလည်း
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ် ခံစားနေရသော ရောဂါများအတွက် ခံတွင်းကို ဆီ ဖြင့် ပလုပ်ကျင်းပါ ..( အကျိုးကြီးမားသော ကျန်းမာရေး လက်ဆောင် )
Shwe MM | June 29, 2020
ကိုယ်တိုင် အုန်းဆီ ခဏငုံထားပြီး မှ အာလုတ်ကျင်း လုပ်လာတာ ကြာပြီ အင်မတန်အကျိုးများ လှပါတယ်နော် …အရမ်းမှန် ကျေးဇူးကြီး လှတဲ့ ဗဟုသုတဘဲ : ကိုယ် သွားဖုံးအပြည်တည်ပြီးအပြည်ပေါက်တော့ကျောက်ကပ်ကမခံမရပ်နိုင်နာတယ်ယောင်တယ် ဆီးလဲသွားလို့ ခက်လာတယ်သိပ်မထွက်တော့ဘူး စနေနေ့ကသွား လဲထွက်သွားရော ခဏနေ ယူပစ်လိုက်သလိုနေ သာထိုင်သာရှိသွား တာ ခုထိကျောက်ကပ်ကဘာမှမဖြစ်သလိုဒူးနာတာပါသက်သာလာခဲ့ ဆီနဲ့လဲပလုပ်ကျင်းနေပါပြီ ။ခံတွင်းက ရောဂါပိုးနှင့်အဆိပ်တွေကို
ကိုဗစ် ကာလမှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် လုပ်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ချက် ကိုမျှဝေ ပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်